Uyenza njani iVidiyo ye-LED Wall XR eyiVenkile ebonakalayo
Isitudiyo esibonakalayo sedijithali yedijithali sisicelo esivelayo esikhangele umdla omkhulu ekhaya nakumazwe aphesheya kule minyaka idlulileyo. Idibanisa itekhnoloji yokuboniswa kwetekhnoloji yakutshanje ye-LED kunye nenkqubo yekhamera ebonakalayo, inkqubo yokunikezela ngexesha lokwenyani, njl.
Ungayifumana phi i-P2 yeNdawo yokuKhanya okungaphakathi ngaphakathi ngaphandle kwe1000USD
I-Electronics eshushu i-P2 encinci yokubonisa i-LED, ichaphaza elingu-2mm, lenziwe ngekhabethe ye-die-cast aluminium, i-SMD 1515 isibane esimnyama, ixhasa ulondolozo lwenkonzo yangaphambili, ivuthiwe kwaye izinzile, isetyenziselwa usetyenziso lwangaphakathi lwenkcazo ephezulu ekhokele usetyenziso lodonga lwevidiyo. Amagqabantshintshi: Ubungakanani bePaneli: 640mm * 480mm L ...
AyisiyoNdebe yaseYurophu kuphela! Amatyala okuDala okuDityaniswa kweziganeko zemidlalo kunye nezikrini ze-LED
Abahlobo abathanda ibhola, ngaba uziva wonwabile kule mihla? Kulungile, kuba iNdebe yeYurophu ivule! Emva kokulinda unyaka wonke, xa iNdebe yeYurophu izimisele ukubuya, uchulumanco luthathe indawo yoxinzelelo noxinzelelo lwangaphambili. Xa kuthelekiswa nokuchonga ...
Amanqaku ama-3 abalulekileyo wokuthenga umboniso we-LED omncinci wePitch
1. Ukuqwalaselwa ngokubanzi kwendawo yokubeka amanqaku, ubungakanani kunye nesisombululo sePixel, ubungakanani bepaneli kunye nesisombululo zizinto ezininzi ezibalulekileyo xa abantu bethenga imiboniso emincinci ye-LED. Kwimeko eyiyo, ayisiyonto encinci ukuba i-pixel pitch kunye nokuphakama kwesisombululo ...
Izinto eziluncedo nezingeloncedo kubuchwephesha bokupakisha obahlukeneyo beemveliso ezincinci ze-LED kunye nekamva!
Iindidi zee-LEDs ezincinci ze-pitch zonyukile, kwaye sele beqalisile ukukhuphisana ne-DLP kunye neLCD kwintengiso yangaphakathi. Ngokwedatha kwisikali semarike yokubonisa ye-LED, ukusukela ngo-2018 ukuya ku-2022, izibonelelo zomsebenzi womboniso omncinci we-LED ...
Ngexesha lesandi esihle, izixhobo ezipakishwe nge-IMD zikhawulezisa urhwebo lwentengiso ye-P0.X
Ukuphuhliswa okukhawulezayo kwemakethi yokubonisa encinci ye-Mini-pitch kwimiboniso yentengiso ye-LED ubukhulu becala ineempawu ezilandelayo: Isithuba esichaphaza siya sisiba sincinci kwaye sincinci; Ukuxinana kwepikseli kuya kuphakama; Indawo yokubukela iyasondela kwaye isondele ...
Amaxesha e-EET-Impembelelo yokunqongophala kwe-IC kuyanda ngaphaya kwezeMoto
Ngelixa uninzi lwengqwalaselo ngokubhekisele kukunqongophala kwe-semiconductor kugxile kwicandelo lezithuthi, amanye amacandelo oshishino kunye nedijithali abethelwa nzima ngokulinganayo kukuphazamiseka kwenkqubo yokubonelela nge-IC. Ngokwe-survey yabenzi abagunyaziswe ngumthengisi wesoftware uQt G ...
Nge-Meyi kaJulayi kaJulayi i-Nationstar LEDs P2.5 P2.91 P4.81 Stock
I-Elektroniki eshushu I-Nationstar LEDs P2.5 P2.97 P4.81 Stock LED Screens Specification: P2.5 Indoor LED Video Wall -Fixed LED Display - Indoor LED Screen Nationstar LEDs SMD2121 Ubungakanani: 50sqm IKhabhinethi Ubungakanani: 640mmx480mm; IsiGqibo seKhabhinethi: 256x192 pixels; Uqwalaselo lwePaneli ...
Isiqinisekiso esitsha se-CE esivela eShenzhen Hot Electronics Co, LTD
Uphawu lweConformitè Europëenne (CE) luchazwa njengophawu olunyanzelekileyo lokumakisha ukulawulwa kweempahla ezithengiswa kwiNdawo yezoQoqosho yaseYurophu (i-EEA) ukusukela ngo-1985. Ukumakisha kwe-CE kubonisa isibhengezo somvelisi sokuba iimveliso ziyahambelana ...
Ityala leprojekthi yesikrini se-Elektroniki eshushu ngaphambi ko-2021
Hot Electronics Co., ltd yasekwa ngo-2003, kunye neminyaka engaphezu kwama-18 kwimbali ekumgangatho ophezulu LED Bonisa ukuyila kunye nokuvelisa. Sisebenzisane ngempumelelo namazwe angama-200 kwi-worlwide, kubandakanywa iiprojekthi ezingama-20 + zeBala, ii-30 + zeZitishi zeTV, iimveliso zethu ...
Isaziso seeholide se-2021 QingMing Festival -Izixhobo ezishushu ze-Elektroniki
Bathengi abathandekayo: Ngokwesaziso sikarhulumente, nge-3 ka-Epreli 3 ~ 5, ngo-2021 ikwiholide ye-2021 Qing Ming Festival. Ukuze kube lula ukunxibelelana neshishini kubathengi bethu, amalungiselelo acacisiweyo eeholide aya kuba ngolu hlobo lulandelayo: Iholide ngo-Epreli 3 & 4 & a ...
Kutheni abantu abaninzi besebenzisa i-LED endaweni yeLCD okanye i-DLP okanye iProjektha?
1, Ukusebenza ngokugqibeleleyo kweVidiyo P2.5 P1.8 isibonakaliso se-LED sinokukhanya okuphezulu, umahluko omkhulu, kunye nokugcwaliswa okuphezulu kombala, okwenza umboniso we-LED ucace gca kwaye ucace ngakumbi kuneLCD. Uhlobo lokuqaqamba kokwahlulahlula phakathi umda wombala we-LED 200-7000nits 3000 -...